Izisebenzi Zemigodini Zilakho Ukuswela iBonus Lonyaka
Lwezi 25, 2014
Izisebenzi zase migodini zibikwa zilakho ukuswela ama bonus azo lonyaka kubangelwa yikuma kubi komumo wezinto elizweni ikakhulu kwezenotho.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi zasemigodini eye National Mine Workers Union of Zimbabwe umnumzana Sylvester Mushaike uthi inengi lemigodi elizweni ibhekane lenkinga yokusilela kwemali okokuthi ayenelisi lokubhadala ama subscription enhlanganisweni ezifana leyakhe okokuthi kaboni isenelisa ukutholisa uzisebenzi ama bonus azo lonyaka. Uthi imali ebhadalwa yizisebenzi iphansi kakhulu okwamanje ethi baphakathi komsebenzi omkhulu wokulwela ukuba bethole iholo elisusa izisebenzi ebuyangeni.
Uthi izisebenzi zilokhe zikhangelela iholo elizwayo sikhangela lokho okwenzakala ezansi ye Africa lapho izisebenzi ezifuna ukuba iholo lazo lifike kunkunulungwane lengxenye yamadollar-$1,500 ngenyanga ethi noma kunjalo lokhu kungaba ngamaphupho nje kuphela sikhangela umumo wezinto kuleli.
Imali edingeka ukuba imhuli elabantu abayisithupha iphile kuhle i-poverty datum line okwamanje iphezu kwamakhulu amahlanu ngenyanga khona izisebenzi zemigodini zithola imali ephezu kancane ku makhulu amabili amadollar-$239.41 ngenyanga.